UNWTO: Dalxiisku waa quwad caalami ah oo koboc iyo horumarba leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » UNWTO: Dalxiisku waa quwad caalami ah oo koboc iyo horumarba leh
Wararka Ururada • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ayaa ku shiray Baku, Azerbaijan, Kulankii 110-aad ee Golihiisa Fulinta (16-18 Juunyo). Kulankan, Dowladaha Xubnaha ka ah waxay ku taageereen horumarka Ururka iyo qorshayaashiisa mustaqbalka, sida lagu qeexay xoghayaha guud Zurab Pololikashvili, waxayna si diiran u soo dhaweysay ka qeybgalka Mareykanka iyadoo sahamineysa suurtagalnimada ku biirista UNWTO.
Iyadoo soo-galootiga caalamiga ah ee soo kordhay ay 4% kordheen rubucii koowaad ee sanadka 2019, ka dib markii ay 6% ka koreen 2018, hay'adda Qaramada Midoobay ee mas'uulka ka ah kor u qaadista mas'uuliyadda, waarta iyo dalxiiska la heli karo ee guud ayaa ku kulmay Azerbaijan Kulankii 110-aad ee Golihiisa Fulinta. Goluhu wuxuu isu keenaa Dowladaha Xubnaha ka ah UNWTO si ay uga wada hadlaan heerka ugu sarreeya ee jihada waaxda dalxiiska adduunka.
"Waa farxad aad u weyn inaan joogo magaalada firfircoon ee Baku kal-fadhigii 110-aad ee Golahayaga Fulinta," ayuu yiri Mudane Pololikashvili. “Golaha Fulinta wuxuu siinayaa Dowladaha Xubnaha ka ah UNWTO aragti guud oo ku saabsan howlaha UNWTO iyo horumarkii ay gaareen sanadkii ka horeeyay, wuxuuna ka soo bixiyaa talooyin muhiim ah tubta soo socota. Waqtigeena Baku wuxuu na siiyay fursad qumman oo aan uga wada hadalno caqabadaha ay soo bandhigtay kororka socda ee tirada dalxiiska, oo ay kujirto abuurista shaqooyin aad ufiican oo wanaagsan iyo wadista sinaanta jinsiga. Waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dowladaha xubnaha ka ah sida ay ugu heellan yihiin waajibaadka UNWTO waxaanan uga mahadcelinayaa Mareykanka joogitaankooda iyo furfurnaantooda suurtagalnimada ku soo noqoshada iyo la shaqeynta in dalxiiska laga dhigo mid horseed u ah kobaca iyo sinnaanta. ”
Mr. Fuad Nagiyev, Madaxa Wakaaladda Dalxiiska ee Jamhuuriyadda Azerbaijan, wuxuu muujiyey taageerada uu u hayo himilada UNWTO, isagoo xusay inay “sharaf u tahay” in waddanka loo doorto inuu marti-geliyo Kal-fadhigii 110-aad ee Golaha Fulinta.
Dhacdooyinka UNWTO, oo ay ku jiraan Golahan Fulinta, waa barnaamujyo waaweyn oo lagu dhiirrigeliyo suurtagalnimada dalxiiska iyo sameynta iyo horumarinta xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn ah oo lala yeesho UNWTO iyo Dowladaha Xubnaha ka ah, ”ayuu raaciyay Mr Nagiyev.
Buuxinta himilada UNWTO ee dalxiiska oo ah xoog wanaag
Dowladaha xubnaha ka ah ayaa si diirran u soo dhoweeyay horumarka la sameeyay iyadoo UNWTO ay ka shaqeyneyso sidii loo fulin lahaa aragtida maamul ee hadda jirta. Si gaar ah, Shanta Ahmiyadood ee hoosta ka xariiqaya waajibaadka Xoghayaha Guud Pololikashvili waxaa ka mid ah in dalxiiska laga dhigo mid caqli badan iyada oo loo marayo soo dhaweynta hal-abuurnimada iyo isbeddelka dhijitaalka ah iyo tartanka sii kordhaya iyo hal-abuurnimada ee waaxda dhexdeeda. Isla mar ahaantaana, in dalxiiska laga dhigo isha horseedka u ah shaqooyin badan oo ka wanaagsan, iyo bixiyaha sare ee waxbarashada iyo tababarka ayaa ah mid kale oo ahmiyadaha UNWTO.
Kulankii Dowladaha Xubnaha ka ahaa ee ka dhacay Baku waxaa lagu wargeliyay horumarka la gaaray si looga dhigo dalxiiska mid loo wada dhan yahay, oo aan muuqan iyo hab loo ilaaliyo loona horumariyo hiddaha bulshada iyo dhaqanka iyo joogtaynta deegaanka. Intaa waxaa sii dheer, horumarka laga sameeyay 'Agenda UNWTO ee Afrika 2030' ee dhowaan la bilaabay ayaa la soo dhoweeyay. Qorshaha geesinimada leh ee afarta sano ah waxaa loogu talagalay in lagu xaqiijiyo awooda dalxiis ee Afrika, iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo dalxiiska oo ah wade ka shaqeeya yareynta saboolnimada, shaqo abuurka iyo horumarinta xirfadaha.
Habaynta hayadaha iyo joogtaynta dhaqaalaha
Golaha Fulintu wuxuu kaloo ansaxiyay natiijooyinkii ugu dambeeyay ee maaliyadeed ee wanaagsan iyo dib-u-habeynta qaabdhismeedka ee laga hirgeliyay Xoghayaha Guud, taasoo ka tarjumeysa dadaalka socda ee lagu dammaanad qaadayo jiritaanka dhaqaale ee Ururka.
Heerka hay'addeed, UNWTO waxay ku celisay sida ay uga go'an tahay kala duwanaanta iyo hufnaanta. Ururku wuxuu horay ugu sii socdaa abuuritaanka Heshiis Qaab-dhismeed cusub oo ku saabsan Anshaxa Dalxiiska. Heshiiskani wuxuu UNWTO la socdaa hay'adaha kale ee Qaramada Midoobay intooda badan, wuxuuna si gaar ah u siinayaa Dowladaha Xubnaha ka ah tilmaamo cad oo ay ku gaari karaan waaxyadooda dalxiiska ee wadayaasha kobaca iyo ka-mid-ahaanshaha.
Kulankii ka dhacay Baku ayaa loo dabaaldegay iyadoo UNWTO ay isu diyaarineyso Kalfadhiga 23aad ee Golaha Guud, oo lagu qaban lahaa magaalada Saint Petersburg, Xiriirka Ruushka, bisha Sebtember. Waxaa la qabtaa labadii sanoba mar, Golaha Guud waa kulanka ugu muhiimsan ee heer sare ah ee Wasiirada Dalxiiska adduunka iyo waaxda gaarka loo leeyahay ee adduunka.